Isbahaysiga Saddex Geesoodka Ah (WQ: Cabdiraxmaan Abdishakuur) | Qorilugud News 24
Isbahaysiga Saddex Geesoodka Ah (WQ: Cabdiraxmaan Abdishakuur)
Innaga Iyo Itoobiya Waxaanu Nahay Laba Dal Oo Deris Ah. Loolan Siyaasaddeed Oo Dheer Ina Dhexmaray. Waa Dal Weyn Oo Itaal, Dhaqaale Iyo Xiriir Dawli Ah Intaba Innaga Badan. Waxay Kale Oo Inaga Sitaan Aqoonta Ay Inoo Leeyihiin. Ma Badna Inta Aan Itoobiya Ka Naqaan. Inta Badan Xogteenu Waxay Ku Dhisan Tahay Waa La Yiri Iyo Cilmi Dhagood.
Kooxda uu hoggaamiyo Merera Gudina oo ah Oromo Federalist Congress (OFC). Waxaa kaloo jira Oromo Democratic Front, (ODF) oo uu hoggaamiyo Lencho Letta. Waxaa kaloo jira Oromo Liberation Front (OLF) oo uu hoggaamiyo Dawud Ibsa. Waxaa kaloo jira kacdoonka dhallinyarada oo la yaqaan Qeerroo oo uu hoggaamiyo Jawar Mohammed. Iyo kooxda uu Abiy hogaamiye oo horay loo oran jiray Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), laakiin haatan la baxay Oromo Democratic Party, (ODP). Markii uu Hailemariam Desalegn is casilay ayaa si uu Abiy ugu tartamo hoggaanka ururka EPRDF, waxaa xilka OPDO uga tanaasulay Lemma Megersa oo ah Madaxweynaha Kililka Oromada.
Sida muuqata Abiy gacanta kuma wada hayo xooggaga siyaasadeed ee Oromada. Sidoo kale gacanta kuma wada hayo dawladaha gobollada, qolo kasta ama koox siyaasadeed kasta ajende iyaga u gaar ah ayey wadataa. Waxaa intaa dheer shaki la kala qabo. Ma jirto qowmiyad doonaysaa in dib loogu noqdo sidii Derg ahaan jiray oo ay Amxaarada awooda xogeeda magaca dawlada dhexe ku haysatay, ama sidii federaalka magaca ahaa, laakiin Tigreega ay xukunka dhabta ah iyagu haysteen. Ma sahlana in nidaam Dimoqoraadi ah oo tartan daah furan doorasho lagu kala helo uu haatan Itoobiya ka hirgalo, mana sahlana in sidii ay ahaan jirtay dib loogu celiyo.
Isbahaysiga Saddex Geesoodka Ah
Abiy Axmed oo dalkiisa marxalad kala guur ah oo adag ku jiro wuxuu doonayaa in uu hogaamiyaha Eritrea gacanta ku hayo si uusan carqalad ugu noqon ama caqabad u dhigin. Afwerki qudhiisa wuxuu doonayaa in uu marxaladdaan ka faa’iido oo cunaqabataynta laga qaado, hubiyana Itoobiya oo xooggan oo halis ku ah Eritrea aysan soo noqon. Waa nin Itoobiya aad u kala yaqaan, garan karana halka ay ka jilcantahay iyo halka ay halista kaga keeni karto. Wuxuu kaloo doonayaa in uu geeska geliyo il gaar ah ku eego Jabuuti iyo Suudaan oo ay si wayn isku hayaan. Waxaan la ogayn waxa uu Madaxweyne Farmaajo ka doonayo Isbahaysigan oo aan ka ahayn waxa ay taageerayaashiisa Facebook ku soo qoraan oo ah in maamul gobolleeyadii iyo Somaliland meel laga saarayo.
Waan garan karaa in dadka qaarkii ay dhibsadeen habdhaqankii maamul goboleedka ee ay Itoobiya ka dhex bixi jirin iyaga oo dalwadda dhexe la xafiiltamaya. Runtii waa dood sharci ah.
Dhinaca kale, waa in aan garawsanaa in aysan jirin cid kaaga sama falaysa waxay u aragto in uu yahay taagdaro istiraatiijiyadeed (strategic weakness) uu dalkaadu leeyahay. Waa laga yaabaa in si ku meel gaar ah lagaaga khafiifiyo, laakiin way adag tahay in abid lagaa joojiyo. Mar haddii arrinku sidaas yahay waxaa haboon in aad xalliso sababta keentay mushkiladda intii aad baryi lahayd hoggaamiye dal kale. Waa in aad soo celiso kalsoonidii iyo is aaminaddii kuna qanciso kuwa talada kaala dhaxayso in iay dhaqankaas ka waantoobaan. Tan kale waa in meesha laga saaro baahida loo qabo joogitaanka ciidanka Itoobiya oo haatan ammaanka Soomaaliya marti looga yahay. Waa laga yaabaa in taaktikada isbedasho, laakiin waa hubaal in aysan Istiraatiijiyadu marna isbedelaynin.
Dawladaha Gobolka gaar ahaan, Suudaan, Jabuuti, Kenya iyo Uganda waxay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa Isbahaysiga seddex geesoodka ah. Sababtuna waxay tahay in aan la ogayn ujeedka dhabta ah ee Isbahaysiga ka danbeeya. Seddexda dawladood waxay kuwada jiraan IGAD. Waxaa kale oo la is weydiinayaa ma waxaa jira duul kale ee Gobolka ka baxsan oo gadaal ka riixaya Isbahaysigan? Haddii ay su’aasho HAA tahay maxaa dawladaha Jabuuti, Suudaan iyo Kenya looga reebay. Mise Isbahaysigu waa mid jilid ah oo caqabadaha hoggaamiye walba gudaha dalkiisa ka haysta kaga dhuumanayo? Mise waa mid dano ku meel gaar ah lagu xallinayey? sida cunaqabatayn qaadista Eritrea oo Abiy iyo Afwerki ayaa dano ku kala bedelanayey?. Taasina waxaa xoojinaya in aanu Isbahaysiga qaabdhismeed iyo xoghayn maamul toona lahayn, wax dukumiinti ahna kama soo baxaan, hab-raac shaqo, iyo hannaan dabagalna ma laha.
Laakiin dadka wax ka qora ama u kuurgala arrimaha Geeska Afrika uma arkaan Isbahaysi sii tilaabsan kara marka la eego caqabadaha ku hor gudban gudaha iyo bannaankaba. Itoobiya waxay ku jirtaa xili gala guur oo caqabado badani haystaan, sidoo kale Eriteria waxaa soo wajahaya caqabado isbedel doon iyo nidaam beddelid ah oo gudaha kaga imaanaya, Soomaaliyana kaba sii daran. Wax wayn kama beddelna isbahaysigii dhicisoobay oo sanadkii 2002-dii lagu dhisay madasha Sanca (Sana’a Forum) oo ay isku bahaysteen Itoobiya, Yaman iyo Suudaan, markii danbana Jabuuti iyo Soomaaliya gadaal kaga biireen. Sanca Forum ujeedooyinka la mid ah kan haatan la sameeyey ayuu lahaa oo ahaa Iskaashi amni, dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayuu ahaa.